Cherekedza pakushandiswa kwerabhoritari girazi, chii chauri kufuratira | Xipingzhe
Ding, ding, bang, yakaputsa imwe, uye ichi ndicho chimwe chezvishandiso zvakajairika murabhoritari, magirazi. Kuchenesa magirazi uye kuomesa sei.
Pane zvakawanda zvaunofanira kuteerera panguva yekushandisa, iwe unoziva?
The use yeakajairwa giraziware
1. Kurongwa: Mumwe mucherechedzo pipette (anonzi muhombe dumbu pipette), akapedza kudzidza pipette (isina kukwana dhizaini mhando, yakakwana dhizaini mhando, inoridza-kunze mhando)
Imwe chete yemapaipi pipette inoshandiswa kupayipita imwe vhoriyamu yemhinduro nenzira kwayo. Dhayamita yechikamu chekumaka cheiyo imwechete-yakamarwa pombi iri diki uye iko kurongeka kwakakwirira; Iyo indexing pipette ine hombe dhayamita uye iko kurongeka kuri kutonyanyisa. Naizvozvo, kana uchiyera huwandu hwakazara hwemhinduro, saizi inoenderana inowanzo shandiswa Imwe chete mamaki pombi asi pachinongedzo chepipette.
Pipetting: yekuyedza inoda kukwirisa kwepamusoro, pukuta mvura yakasara kubva pamucheto wepombi nepepa rekusefa, wozosuka mvura mukati nekunze kwetipi yepombi nemvura yekumirira katatu kuti uone kuti kusangana kwe bvisa inoshanda mhinduro inoramba isina kuchinjika Chenjera kuti usaregedzere mhinduro yekudzivirira kutsvaira uye kusvibiswa kwemhinduro.
Paunenge uchirova mhinduro kuti isvike, isa muromo wepombi 1-2cm pazasi pemvura (yakadzika kwazvo, mhinduro yakawandisa inonamatira kumadziro ekunze ehubhu; zvakare isina kudzika: kukweva isina chinhu mushure mekudonha kwemvura).
Kuverenga: Mutsara wekuona uri padanho rakaenzana neyepasi pasi peiyo meniscus yemhinduro.
Regedza: muromo wepombi unobata mukati memudziyo kuitira kuti ngarava itendamike uye chubhu irambe yakatwasuka.
Kuruboshwe wakasununguka pamadziro: Pombi isati yabviswa mumudziyo unogashira, mirira masevhoni matatu kuti uve nechokwadi chekuti mvura irikubuda zvachose.
(2) volumetric chinu
Inonyanya kushandiswa kugadzirira mhinduro yeiyo chaiyo yekufungisisa.
Usati washandisa mabhodhoro evhoriyamu, tarisa kuti huwandu hwemabhodhoro evhoriyamu anoenderana here nezvinodiwa; Mabhoramu evhoriyamu evhoriyamu anofanirwa kushandiswa pakugadzirira kwechiedza zvinhu zvakasanganiswa. Kunyangwe iyo yekugaya plug kana ipurasitiki plug inodonha mvura.
1. Leakage bvunzo: wedzera pombi yemvura kunharaunda iri padyo nemutsara wetsamba, vhara korki zvine simba, pinda plug nepamberi, simisa bhodhoro rakatarisa pasi kwemaminetsi maviri, uye shandisa yakaoma firita bepa kuti uone kana paine seepage yemvura pamwe kana pasina mvura inodonha, tenderedza kork 180 ° uye umire pamusoro wayo kwemimwe maminetsi maviri kuti utarise.
Magirazi egirazi anofanirwa kushandiswa kana uchichinjisa mhinduro kumabhodhoro evhoriyamu;
Usabata bhodhoro muchanza cheruoko rwako kudzivirira kuwedzera kwemvura;
Kana vhoriyamu iri muhombodo yevholumetric yasvika panenge 3/4, zunza iro bhodhoro revolumetric kwenguva dzinoverengeka (usadzokere shure), kuti mhinduro isanganike zvakanaka. Wobva waisa volumetric bhodhoro patafura uye zvishoma nezvishoma wedzera mvura kusvikira yave padyo nemutsara 1cm, uchimirira 1-2 maminetsi kuti usiye mhinduro yakanamatira kumadziro eganda. Wedzera mvura kune yakaderera poindi pazasi yekukotama mvura nhanho uye tangent kune iyo mamaki;
Mhinduro inopisa inofanira kutonhodzwa kutembiricha yemukati usati wajowa muhombodo ye volumetric, zvikasadaro kukanganisa kwehuwandu kunogona kukonzerwa.
Bhodhoro revhoriyamu haigone kubata mhinduro kwenguva yakareba, kunyanya iyo lye, inozokanganisa girazi uye yoita kuti kork inamatire uye isingakwanise kuvhura;
Kana iro bhodhoro revolumet rinoshandiswa kumusoro, sukurudza nemvura.
Kana isina kushandiswa kwenguva yakareba, geza uye bvisa iyo yakaoma uye peta nepepa.
Kunyangwe ese marudzi egirazi anoshandiswa mune epanyama uye emakemikari marabhoritari akachena anowanzo kukanganisa kuvimbika uye kurongeka kweyekutsvaga mhedzisiro, saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti girazi rinoshandiswa rakachena.
Kune nzira dzakawanda dzekugezesa magirazi, ayo anofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa pakuyedzwa, hunhu hwetsvina nedhigirii rekusvibisa. Chishandiso chekuyera chinoda kuyera mhinduro nenzira kwayo, hazvisi nyore kushandisa bhurasho pakuchenesa, nekuti bhurasho rinoshandiswa kwenguva yakareba, zviri nyore kupfeka madziro emukati echinhu chekuyera, uye izvo zvinhu kuti zvive kuyerwa hakuna kururama.
Girazi ware kuchenesa kuongorora: iyo yemukati madziro inofanirwa kunyoroveswa nemvura isina hura.
(1) Bhurasho nemvura;
(2) Geza nesipo yekugezesa kana sipo (iyi nzira haina kukurudzirwa kuchromatography kana kuyedza kwemasiprometry kuyedza, ma surfactant haasi nyore kuchenesa, anogona kukanganisa mhedzisiro yekuedza)
(3) Shandisa chromium lotion (20g potassium dichromate inonyungudutswa mu40g inopisa uye inomutswa mvura, uyezve 360g maindasitiri akaiswa hydrochloric acid inowedzerwa zvishoma nezvishoma): ine simba rakasimba rekubvisa mafuta kubva kune yakasikwa zvinhu, asi yakanyanyisa uye ine humwe huturu. Teerera kuchengeteka;
(4) Mamwe mafuta;
Alkaline potassium permanganate lotion: 4g potassium permanganate inonyungudika mumvura, 10g potassium hydroxide inowedzerwa uye inosanganiswa nemvura kusvika ku100ml. Inoshandiswa kuchenesa mavara emafuta kana zvimwe zvinhu zvakasikwa.
Oxalic acid lotion: 5-10g oxalic acid inonyungudutswa mu100ml mvura, uye hushoma hweakakoshesesa hydrochloric acid inowedzerwa. Mhinduro iyi inoshandiswa kugeza manganese dioxide inogadzirwa mushure mekuwachwa ne potassium permanganate.
Iodine-potassium iodide lotion (1g iodine uye 2g potassium iodide inonyungudika mumvura uye yakadzvanywa nemvura kusvika ku100ml): yaishandiswa kugezesa yakasviba tsvina yakasara yesirivheri nitrate.
Yakachena pickling mhinduro: 1: 1 hydrochloric acid kana nitric acid. Inoshandiswa kubvisa trion ions.
Alkaline lotion: 10% sodium hydroxide aqueous solution. Mhedzisiro yekudzora nekupisa iri nani.
Organic solvents (ether, ethanol, benzene, acetone): yaishandiswa kushambidza mafuta emafuta kana zvinhu zve organic zvakanyungudutswa mune iyo solvent.
Iyo giraziware inofanirwa kushambidzwa uye kuomeswa kuti ishandiswe gare gare mushure mekuedzwa kwese. Kuyera kwakasiyana kune zvakasiyana zvinodiwa kune iyo degree yekuoma kwemidziyo yegirazi. Semuenzaniso, chinwiwa chetatatu chinoshandiswa kutemera acidity chinogona kushandiswa mushure mekuwachwa, nepo chinwiwa chetatu chakashandiswa mukumisikidza kwemafuta chinoda kuomeswa. Chimbo chinofanira kuomeswa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana.
(1) Kuomesa kuoma: kana usingaidi nekukasira, inogona kuomeswa yakapesana pasi;
(2) Kuomesa: Inogona kuomeswa muchoto pa105-120 ℃ (mudziyo wekuyera haugone kuomeswa muchoto);
(3) Kufuridza-kuomesa: mweya unopisa unogona kushandiswa kuomesa nekukurumidza (girazi rekushandisa girazi).
Ehezve, kana iwe uchida yakachengeteka uye inoshanda yekuchenesa uye yekuomesa nzira, iwe unogona zvakare kusarudza murabhoritari glassware washer inogadzirwa neXPZ. Izvo hazvigone chete kuona yekuchenesa mhedzisiro, asi zvakare chengetedza nguva, kushanda nesimba, mvura uye basa. Laboratory glassware washer inogadzirwa ne XPZ inotora yazvino epasi rese yekuchenesa tekinoroji. Iyo inogona kupedzisa otomatiki kuchenesa, disinfection uye kuomesa neine bhatani, kukuunzira iwe chiitiko chitsva chekugona, kumhanya uye chengetedzo. Kubatanidzwa kwekuchenesa uye kuomesa hakungogadzirise iwo mwero uye kugona kwekuyedza kushandisa, asi zvakare kunoderedza zvakanyanya kusvibiswa uye kukuvara panguva yebasa.